I-China SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test manufacturers kunye nabathengisi | Umda weBio
ElElouStep®Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 lwe-Antigen olukhawulezileyo luvavanyo lwe-immunochromatographic olukhawulezileyo lokufumanisa i-antigen ye-COVID-19 ukuya kwintsholongwane ye-SARS-CoV-2 kwintsholongwane yomqala / yeNasopharyngeal. I-assay isetyenziselwa uncedo lwe-asan ekuchongeni i-COVID-19.
Inoveli coronaviruses yeyohlobo lwe-. I-COVID-19 sisifo esosulelayo sokuphefumla. Ngokuqhelekileyo abantu bayachaphazeleka. Okwangoku, izigulana ezisulelwe yinoveli yecoronavirus zezona zinto ziphambili kusulelo; abantu abosulelekileyo abosulelekileyo banokuba sisifo esosulelayo. Ngokusekwe kuphando lwangoku lwe-epidemiological, ixesha lokuxubusha ziintsuku ezi-1 ukuya kwezi-14, ubukhulu becala iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7. Iimpawu eziphambili zibandakanya umkhuhlane, ukudinwa kunye nokukhohlela okomileyo. Ukuxinwa kwempumlo, impumlo ebusayo, umqala obuhlungu, i-myalgia kunye norhudo zifumaneka kwiimeko ezimbalwa.
IStrongStep®Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 lwe-Antigen lisebenzisa isixhobo sovavanyo lwe-chromatographic lateral test kwifomathi yekhasethi. ILatex conjugated antibody (Latex-Ab) ehambelana ne-SARS- CoV-2 yomile-ingenakwenziwa ekupheleni komtya wenwebu ye-nitrocellulose. Iintsholongwane ze-SARS-CoV-2 zizibophelelo kuMmandla woVavanyo (T) kunye neBiotin-BSA zizibophelelo kuMmandla woLawulo (C). Xa isampulu yongezwa, ifuduka ngokusasazeka kwe-capillary iphinde ifake i-latex conjugate. Ukuba ikhona kwisampulu, ii-antigen ze-SARS-CoV- 2 ziya kubopha kunye neentsholongwane ezincinci ezihlanganisiweyo ezenza amasuntswana. La masuntswana aya kuqhubeka nokuhamba ecaleni komtya kude kube kwindawo yoVavanyo (T) apho zifakwa khona ngamaseli omzimba a-SARS-CoV-2 avelisa umgca obomvu obonakalayo. Ukuba akukho anti-anti-SARS-CoV-2 antigen kwisampuli, akukho layini ebomvu yenziweyo kwindawo yoVavanyo (T). I-streptavidin conjugate iya kuqhubeka nokuhamba yodwa ide ibanjwe kuMmandla woLawulo (C) yi-Biotin-BSA ehlanganisiweyo emgceni, ebonisa ubunyani bovavanyo.
Izixhobo eziphathwayo zovavanyo eziyi-20
Isixhobo ngasinye sine-strip enee-conjugates ezinemibala kunye ne-reagents ezisebenzayo esele zisasazekile kwiindawo ezihambelanayo.
2 Iibhotile zeBuffer
I-0.1 M i-Phosphate buffered saline (P8S) kunye ne -0.02% ye-sodium azide.
20 Iityhubhu zokukhupha
1 Indawo yokusebenzela
Indawo yokubamba iibhotile kunye neetyhubhu.
1 Faka ipakeji
IZINTO EZIFUNEKAYO KODWA AZINIKIWE
Isibali xesha Ukusetyenziswa kwexesha.
Umqala / i-Nasopharyngeal swab Ukuqokelelwa kwemizekelo
Le khithi yenzelwe ukusetyenziswa kwe-VITRO kuxilongo kuphela.
Le khithi isetyenziselwa uNcedo lwezoNyango kuphela.
Funda imiyalelo ngocoselelo ngaphambi kokwenza uvavanyo.
Le mveliso ayiqulathanga naziphi na izinto ezivela ebantwini.
Sukusebenzisa imixholo yekiti emva komhla wokuphelelwa.
Phatha zonke iisampulu njengezosulelayo.
Landela inkqubo esemgangathweni yeLebhu kunye nezikhokelo ze-biosafety zokuphatha kunye nokulahla izinto ezinokubangela isifo. Xa inkqubo ye-assay igqityiwe, lahla iisampulu emva kokuzifaka ngokuzenzekelayo kwi-121 ℃ ubuncinci imizuzu engama-20. Ngenye indlela, banokunyangwa nge-0.5% yeSodium Hypochlorite kwiiyure ezine ngaphambi kokulahlwa.
Sukuyipipette into eyenziwe ngomlomo kwaye ungatshayi okanye utye ngelixa usenza uvavanyo.
Nxiba iiglavu ngexesha lenkqubo yonke.
Iipakethi ezitywiniweyo kwikhithi yokuvavanya zinokugcinwa phakathi kwe-2- 30 ℃ ngalo lonke ixesha lobomi beshelfu njengoko kubonisiwe kwisingxobo.
UKUQOKELELWA KWEZODWA NOKUGCINWA
Isampulu yeNasopharyngeal Swab: Kubalulekile ukufumana ukhuseleko oluninzi kangangoko kunokwenzeka. Ke ngoko, ukuqokelela isampulu yeNasopharyngeal Swab, ngenisa ngononophelo i-Swab engenazintsholongwane kwimpumlo ebonisa ezona mfihlo ziphantsi kovavanyo olubonakalayo. Gcina i-Swab kufutshane nomgangatho we-septum yempumlo ngelixa unyanzela iSwab ungene kwi-nasopharynx yangasemva. Jikelezisa i-Swab amatyeli aliqela. Umqala swab: Uxinzelelo lolwimi ngolwimi okanye ngecephe. Xa usonga umqala, lumka ungabambi ulwimi, amacala okanye umphezulu womlomo ngeSwab. Hlikihla iSwab ngasemva komqala, kwiitoni kunye nakweyiphi na enye indawo apho kukho ububomvu, ukudumba okanye ubofu. Sebenzisa ii-swabs ezifakwe kwi-rayon ukuqokelela iisampulu. Sukusebenzisa i-calcium alginate, i-cotton tipped okanye i-shaft shaft swabs.
Kuyacetyiswa ukuba iisampulu ze-swab zilungiswe ngokukhawuleza emva kokuqokelelwa. I-Swabs inokugcinwa nakweyiphi na ityhubhu yeplastiki ecocekileyo, eyomileyo okanye imikhono ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 kubushushu begumbi (15 ° C ukuya kuma-30 ° C), okanye efrijini (2 ° C kuye ku-8 ° C) ngaphambi kokulungiswa.
Yiza neemvavanyo, iisampulu, i-buffer kunye / okanye ulawulo kubushushu begumbi (15-30 ° C) ngaphambi kokusetyenziswa.
1. Beka ityhubhu ecocekileyo yokutsala kwindawo echongiweyo yendawo yokusebenza. Yongeza amathontsi ali-10 okuSusa iBhafu kwityhubhu yokutsala.
2. Beka i-swab yesampulu kwityhubhu. Ngamandla uxube isisombululo ngokujikeleza amandla e-swab ngokupheleleyo ecaleni kwetyhubhu ubuncinci amaxesha alishumi (ngelixa egxunyekwe). Iziphumo ezilungileyo zifunyenwe xa isampuli ixutywe ngamandla kwisisombululo. Vumela i-swab ukuba ingene kwi-Buffer yoKhupha umzuzu omnye ngaphambi kwenyathelo elilandelayo.
3. Cudisa ulwelo oluninzi kangangoko kunokwenzeka kwi-swab ngokucofa icala lombhobho wokukhupha ubhetyebhetye njengoko ususi ususwa. Ubuncinci i-1/2 yesisombululo sesampulu kufuneka ihlale kumbhobho ukuze kwenzeke ukufuduka kwe-capillary eyaneleyo. Beka ikepusi kwityhubhu ekhutshiweyo. Lahla i-swab kwisitya esifanelekileyo senkunkuma.
4. Iimpawu ezikhutshiweyo zingagcina kubushushu begumbi imizuzu engama-60 ngaphandle kokuchaphazela iziphumo zovavanyo.
5. Susa uvavanyo kwingxowa yalo etywiniweyo, kwaye uyibeke kwindawo ecocekileyo, esemgangathweni. Bhala ileyibhile ngesixhobo sesigulana okanye solawulo. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, uvavanyo kufuneka lwenziwe kwiyure enye.
6. Yongeza amathontsi ama-3 (malunga ne-100 µL) yesampulu ekhutshiweyo kwiTyhubhu yokuKhupha kwisampulu kakuhle kwikhasethi yovavanyo. Kunqande ukubambisa amaqamza omoya kwimodeli elungileyo (S), kwaye musa ukulahla nasiphi na isisombululo kwifestile yokujonga. Njengoko uvavanyo luqala ukusebenza, uya kubona umbala ushukuma kwi-membrane.
7. Lindela amaqela (ombala) anemibala ukuba avele. Iziphumo kufuneka zifundwe kwimizuzu eli-15.
Musa ukutolika iziphumo emva kwemizuzu engama-20. Lahla iityhubhu zovavanyo ezisetyenzisiweyo kunye neeKhasethi zoVavanyo kwisikhongozeli esifanelekileyo senkunkuma.
IZIPHUMO EZIPHAMBILI Iibhanti ezimbini ezinemibala ziyavela ngaphakathi kwemizuzu eli-15. Ibhendi enye enemibala ivela kuMmandla woLawulo (C) kwaye enye ibhendi enemibala ivela kwiZowuni yoVavanyo (T). Iziphumo zovavanyo zilungile kwaye ziyasebenza. Nokuba ibhanti enemibala ibonakala ngathi ityhafile kwiZowuni yoVavanyo (T), iziphumo zovavanyo kufuneka zithathelwe ingqalelo njengeziphumo ezilungileyo.
IZIPHUMO EZIBUHLUNGU Iibhanti enye ezinemibala ziyavela kuMmandla woLawulo (C) ngaphakathi kwemizuzu eli-15. Akukho bhanti ibala ivela kwiZowuni yoVavanyo (T). Iziphumo zovavanyo azichanekanga kwaye ziyasebenza.
IZIPHUMO EZINGEKHO MTHETHWENI Akukho bhanti ibala ivela kwiZowuni yoLawulo (C) ngaphakathi kwemizuzu eli-15. Iziphumo zovavanyo azisebenzi. Phinda uvavanyo ngesixhobo esitsha sovavanyo.
1. Uvavanyo lolokufumanisa ubulunga beantianti anti-SARS-CoV-2 kwianti yomqala / yeNasopharyngeal swab yesampulu kunye nedosi ayibonisi ubungakanani beantigen.
2. Uvavanyo lolokusetyenziswa kwe-vitro diagnostic kuphela.
3. Njengakwimeko yazo zonke iimvavanyo zokuqonda isifo, uxilongo lwezonyango oluchanekileyo akufuneki lusekwe kwiziphumo zovavanyo olunye kodwa kufuneka lwenziwe emva kokuba kuvavanywe zonke iziphumo zeklinikhi, ngakumbi ngokudibeneyo novavanyo lwe-SARS-CoV-2 PCR. 4. Ubuntununtunu besilingo se-RT-PCR kuvavanyo lwe-COVID-19 yi-30% -80% kuphela ngenxa yomgangatho wesampulu ombi okanye ixesha lesifo kwinqanaba elichaziweyo, njl.njl. asezantsi ngenxa yeNdlela yokuSebenza.
Uluhlu lwamagama eempawu
I-Nanjing Liming Bio-Products Co, Ltd.
Inombolo ye-12 Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 PR China.
Ifowuni: +86 (25) 85288506
Ifeksi: (0086) 25 85476387
Indawo yewebhu: www.limingbio.com
Inkxaso kubuchwephesha: poct_tech@limingbio.com
Amaphecana ovavanyo lwe-Antigen Rapid (20200713)
Ikhithi ye-COVID-19 ye-Antigen
Egqithileyo Inoveli Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit
Okulandelayo: Isixhobo seDia Biosafety System seSARS-CoV-2 sovavanyo olukhawulezayo lweAntgen
ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen,